श्रीमान लाई फसाउन श्रीमतीको चलखेल, बाहिरियो यस्तो काण्ड « हाम्रो ईकोनोमी
श्रीमान लाई फसाउन श्रीमतीको चलखेल, बाहिरियो यस्तो काण्ड
धनाढ्य घरकी एक महिलाले आफ्ना श्रीमानबाट छुटकारा पाउनको लागि यस्तो काण्ड गरिन् कि वास्तविकता खुल्दा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी नै दंग परेका छन् ।
भारतीय मिडिया आज तकको समाचार अनुसार राजधानी दिल्लीकी यी महिलाले आफ्नै आत्महत्याको झुटो कहानी रचेकी थिइन् जसको खुलासा मंगलबार भयो ।
यी महिलाले उत्तर प्रदेशको गाजियाबादको हिडन ब्यारेज नजिकै लगेर आफ्नो कार राखिन्, कारमा सुसाइड नोट राखेर फरार भइन् ।
पछि उनी बैंगलोरमा भेटिइन् । आत्महत्याको झुटो कहानी रच्ने कोमल तालान नामकी यी महिलाले गाजियाबादको नहरको पुलमा आफ्नो गाडी राखिन् ।
त्यसपछि उनले नहरमा हाम्फालेर आत्महत्या गरेको खबर फैलियो । ३ दिनदेखि गोताखोरले नहरमा लाश खोजिरहेका थिए तर लाश भेटिएको थिएन ।
कोमलले कारमा सुसाइट नोट पनि छाडेकी थिइन् जसमा उनले आफूले आत्महत्या गर्न लागेको लेखेकी थिइन् । कोमलले यो सब गर्नुको पछाडि उनी श्रीमानदेखि हैरान भएको पाइएको छ ।
उले आत्महत्याको झुटो कहानी रचेर श्रीमानलाई कानुनी रुपमा फसाउन चाहेकी थिइन् । शनिबार बिहान ११ बजे पुलिसले पुलबाट लावारिस स्कार्पियो कार बरामद गरेको थियो ।
स्कार्पियोमा सुसाइड नोट थियो जसमा कोमल तालानको नाम उल्लेख थियो । उनका पिता अनिल तालान भारतीय किसान युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।
उनीहरुको परिवार ग्रेटर नोएडामा बस्छन् । अनिल तालानले पनि छोरीलाई परिवारमा तनाव दिइएको आरोप लगाएका थिए । तर, कोमल भागेर बैंगलोर पुगेको अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई दिल्ली ल्याएर कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।
आफै हेर्ने भनेर श्रीमान–श्रीमतीले बनाएको गोप्य भिडियो चिनेजानेकै व्यक्तिले फेसबुकमा लिक गरिदिएपछि
दम्पतीले आपसी सहमतिमा क्यामेरामा उतारेका निर्वस्त्र क्रियाकलाप चिनेजानेकै एक व्यक्तिको हातमा थियो। ऊ त्यही भिडियो देखाएर मोटो रकम माग गर्न थाल्यो।
लाज र डरले हायलकायल दम्पती अन्त्यमा प्रहरीको शरणमा पुगे। कुनै चलचित्रको कथाजस्तो लाग्ने यस्ता घटना अहिले राजधानीमा छ्यापछ्याप्ती बाहिर आउन थालेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अहिले यस्तै एउटा घटना अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
महाशाखाले ती दम्पतीको उजुरीका आधारमा सोमबार उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले तीनै जनाको नाम गोप्य राखेर अनुसन्धान थालेको छ।
चलचित्रको कथाजस्तो लाग्ने यस्ता घटना अहिले राजधानीमा छ्यापछ्याप्ती बाहिर आउन थालेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अहिले यस्तै एउटा घटना अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
भर्खरै आयो दुखद खबर, बस दुर्घटना हुँदा २९ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । भारतको लखनउबाट दिल्ली जाँदै गरेका बस दुर्घटनामा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसको बस सोमबार बिहान आगरा नजिकै दुर्घटना भएको हो ।
५० यात्रु बोकेर लखनउबाट दिल्लीको जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा अन्य २० जना घाइते भएका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बस चालक निदाएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । चालक निदाएर बसको नियन्त्रण गुमाउँदा बस राजमार्गबाट तल नहरमा खसेर दुर्घटना भएको बताइएको छ ।
बिहान ४ बजेर ३० मिनेटमा भएको दुर्घटना लगत्तै स्थानीय तथा सुरक्षाकर्मीहरु उद्दारमा जुटेका थिए । घाइतेहरुको लखनउस्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये केही महिला तथा बालबालिका पनि रहेका छन् ।
घटनापछि मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले उद्दार तथा राहत कार्यमा तदारुकता दिन निर्देशन दिएका छन् । मृतकका परिवारलाई सरकारले राहतस्वरुप ५–५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
भारत संसारमै सबैैभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना हुने राष्ट्रमध्येको एक हो । भारतमा हरेक ४ मिनेटमा एउटा दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ ।
महिलालाई शारिरीक सम्पर्क गर्दा सबैभन्दा आनन्द कहाँ आउछ ? हेर्नुहोस्
अधिकांश दम्पतीले आफू सुत्ने ओछ्यानमै शारीरिक सम्बन्ध राख्दै आएका हुन्छन् ।
सजिलो र पायक पर्ने हुनाले पनि धेरैका लागि उनीहरूको ओछ्यान नै पहिलो र सुविधाजनक रोजाइ हुन्छ । कसै–कसैले यौनसम्पर्कका लागि बैठक कोठा त कसैले बाथरुमलाई पनि छनौट गर्छन् ।
मानिसको यौन चाहनाको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक डा. शहजाद हार्परका अनुसार जोडीबीच शारीरिक सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा उचित स्थान भान्साकोठा पनि हुनसक्छ । भान्साको बनावट एवं त्यहाँ भएका सामग्रीहरू यौनसम्बन्ध राख्न प्रेरित गर्ने किसिमका नभए पनि डाइनिङ चियरमा बसेको पुरुषमाथि महिला बसेर गरिने शारीरिक सम्बन्ध सर्वाधिक आनन्ददायक तथा स्वास्थबर्धक हुने डा. हार्परको दाबी छ ।
यस्तो शारीरिक सम्बन्धले जोडीलाई क्यालोरी बर्न गर्न पनि निकै सहयोग गर्ने डा. हार्पर बताउँछन् ।
शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि के सोच्छन् त पुरुषहरु ?
शारीरिक सम्पर्क क्रममा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ डक्टरको भनाई
शारीरिक सम्पर्क गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् ।
शारीरिक सम्पर्क क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्तन मिच्ने समेत गर्छन् । शारीरिक सम्पर्क अघि शारीरिक उत्तेजना बढाउन स्तन मिच्ने गरेपनि शारीरिक सम्पर्कका क्रममा स्तन मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ ।
शारीरिक पार्टनरको स्तन मिचेर आनन्द उठाउने पुरुषहरूको लागि एउटा अध्ययनको निष्कर्ष खुशी दिने खालको छ । युसी बर्कली र लरेन्स बर्कली राष्ट्रिय प्रयोगशालाले स्तन मिच्दा वा निचोर्दा क्यासनको सेल्स दू्रतगतिमा बढ्न नसक्ने अध्ययनले बताएको छ ।
भारत्तोलनले मांशपेसी फूलाउने र हड्डी बलियो पारेजस्तै स्तन निचोर्दा स्तनको साइज बढाउने र क्यान्सर रोकथाम गर्ने आन्तिरिक शक्ति थपिने अध्ययनले देखाएको छ ।
शारीरिक रुपमा सँगसँगै स्तन मिच्दा महिला साथीलाई पनि आनन्द आउने भएकाले स्तन मिच्नु उत्तम नै हुने अध्ययनले जनाएको छ । एजेसी
कतिपय पुरुषहरू सधैँ यति आकर्षित हुन्छन् कि हरेक महिला उनीहरूको पहिलो नजर मै आफ्नो मुटु दिने गर्छन् अर्थात् प्रेम गर्दछन् । हामी सोच्ने गर्दछौँ कि वास्तवमा यस्तो किन हुन्छ र हरेक महिला यिनीहरूको प्रेममा पर्छन् ।
हामीलाई लाग्छ कि शायद उनीहरू अरू भन्दा बढी सुन्दर एवम् आकर्षक छन् तर वास्तवमा यो कुरा पूर्ण रूपमा सत्य हुँदैन किनकी यदि वस्तुशास्त्रमा ध्यान दिने हो भने त्यसमा भनिएको छ कि केही विशेष राशिका पुरुषहरू आकर्षणको दृष्टिकोणले बाँकी राशिको सुन्दर भन्दा सुन्दर पुरुषलाई पनि पछाडी पार्दछन् ।
फेरी भारतसामू झुक्यो सरकार, दिल्लीको प्रेसर आएपछि प्रधानमन्त्रीले विषादि जाँच नगर्ने ठाडो प्रस्ताव
भारतको चर्को दवावपछि सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्ववत आफ्नै निर्णय परिवर्तन गरेको छ ।
सीमा नाकामा फलफुल तथा तरकारीको विषादी जाँच गरेरमात्रै नेपाल ल्याउने यसअघिको निर्णयप्रति भारतीय पक्षले असन्तुष्टी जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता गर्न चर्को दवाव दिँदै आएको थियो । भारतीय दूतावासले नेपालका सरकारी अधिकारीलाई विषादी परीक्षण नगर्न दिएको दबाबपछि आफ्नो निर्णबाट पछि हटेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमा नाकामा विषादी जाँच नगर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । पूर्वएमाले निकट ती मन्त्रीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी जाँच नगर्ने ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै भन्सार नाकामा शुक्रबारबाटै भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफुल जाँच नगरी नेपाल पठाउन सर्कुलर जारी गरेको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । गत जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यौन सम्पर्क अघि वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा
आफु सन्तुष्टि भए नभएकोबारे महिलाहरुले किन झुट बोल्छन ? कारण यस्तो रहेछ
कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनले महिलाहरु सन्तुष्टि नपाए पनि आफ्नो जोडीसँग आफूले सन्तुष्टि प्राप्त
घरकी सोझी श्रीमतीलाई छलेर बाहिर कि तरुनी ताक्दा﻿ यस्तो सम्म भयो (हेर्नुहोस भिडियो)
एक बिबाहित जोडीको कथा श्रीमान आफ्नो श्रीमती हुदा हुदै पनि अन्य युवतीको